No galmada guurka ka hor | Apg29
No galmada guurka ka hor
Gladys del Pilar guursadaan Christer Bergh, iyo maalinta aan Akhrino, oo waa in ay sugaan lix arooska.
Tan waxaa loo yaqaan qof lagu daydo oo fiican dad badan. Waxaa intaa dheer, waxa uu muujinayaa in rumaysadka xoog iyo xaqiiq ku siinayaa. Ciise saameeyaa dhammaan dhinacyada nolosha.
Waxaa jira farqi u dhexeeya la "magacyada magacaabay" oo ka rumeeyaan baabtiisay
Waa kitaabi in ay naftooda u baabtiistaa
Sambo, galmada iyo guurka
Waxaa fiican in la guursado badan si ay u gubaan Doonid
Wada noolaanshaha ma aha guur
Sambo ayaa weli ma guurka
Waxaa halkan ku lifaaqan zebra iyo faras lahayn
Sidoo kale akhri: d 1 2 ee t